गोलाप्रथा मार्फत यसरी हुन्छ आइपीओ सेयर बाँडफाँड - Business Awaj
Home Current updates गोलाप्रथा मार्फत यसरी हुन्छ आइपीओ सेयर बाँडफाँड
गोलाप्रथा मार्फत यसरी हुन्छ आइपीओ सेयर बाँडफाँड
गोलाप्रथा मार्फत कसरी हुन्छ सेयर बाँडफाँड हुन्छ ? एउटा बल नम्बर नानेर कसरी सबै आवेदकको सेयर परे नपरेको छिनोफानो हुन्छ ? जस्ता जिज्ञसाहरु लगानीकर्ताहरुले राखेका छन् ।
आइपीओ बाँडफाँड कम्पनीका पदाधिकारी, निश्कासनकर्ता, मिडिया र सर्वसाधारणको उपस्थितिमा हुने चलन छ । जुन पछि सो प्रमाण लाहाछाप हालेर आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीलाई पठाइन्छ ।
गोलाप्रथा मार्फत यसरी हुन्छ सेयर बाँडफाँड
सुरुको आईपीओमा परेको सम्पूर्ण आवेदनलाई नामाकरण गरिन्छ । जस्तै १, २, ३ … अन्तिम आवेदन सम्म सबै आवेदनलाई यूनिक नम्बर प्रदान गरिन्छ । त्यस पछि सबै नम्बरलाई सिक्स डिजिट (6 digit) बनाइन्छ । सिक्स डिजिट बनाउँन नम्बरको अघि ० थपिनेछ ।
जस्तै १ लाई ०००००१, ३ लाई ०००००३ ……..१००००० लाई थप्नु पर्दैन किनकी यो आफै सिक्स डिजिटमा छ ।
अब सो प्रत्यस नम्बरलाई रिभर्स (उल्टो) बाइन्छ ।
जस्तैः माथिको ०००००१ को उल्टो भनेको १००००० हुन्छ, ०००००३ को ३००००० हुन्छ भने १००००० को ०००००१ हुन्छ आउँछ । यसको मतलब अघि सिरियल नंं १००००० भाएको व्यक्ति अब १ नं. मा पुग्छ भने १ भएको व्यक्ति नंं. १००००० मा पुग्छ ।
अब सो रिभर्स नम्बरलाई एसेन्डिङ(बढ्दो क्रम)मा सर्ट गर्ने काम हुन्छ । सर्ट गरेपछि प्राप्त नम्बर नै अन्तिम सिम्बल नम्बरका रुपमा दर्ज हुन्छ ।
आइपीओ बाँडफाँड प्रक्रियामा सुरुमा अघि राखेको टोकरीबाट १ नम्बरदेखि ९ नम्बरमध्ये, कुनै एक व्यक्तिलाई सबैकासामु देखिने गरी बल थुत्न लगाइन्छ ।
मानौं तानिएको बलको नम्बर २ रहेछ भने माथिको नम्बर २ मा रहेको आवेदकले १० कित्ता सेयर पाउँछ ।
अब सेयर पाउने दोश्रो व्यक्ति पत्ता लगाउन स्किप भ्यालु वा सम्भावना (skip value) नम्बर निकालनु पर्छ । स्किप भ्यालु निकाल्न कुल आवेदन संख्यालाई कुल आईपीओ पर्ने संख्याले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि आवेदन संख्या ४ लाख र आईपीओ पर्ने संख्या १ लाख भएमा स्किप भ्यालु ४ हुन आउँछ ।
दोश्रोः स्किप भ्यालुमा बल नम्बर जोड्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै ४ + २ = ६, अब ६ नम्बरले पउँछ ।
तेश्रोः ६ + २ = ८, अब ८ नम्बरले पाउँछ ।
चौथोः ८ + २= १०, अब १० नम्बरले पाउँछ ।
यसरी अन्तिमा प्राप्त स्किप भ्यालुमा बल नम्बर क्रमस जोड्दै अन्य व्यक्ति पात्ता लाइन्छ ।
अब यदि नानिएको बल नम्बर १ भएको भए, १ नं. रहेको आवेदकले १० कित्ता सेयर पाउँछ ।
दाश्रोः ४ + १ = ५ , नं. ५ ले पाउँछ
तेश्रोः ५ + १ = ६ नं., ६ ले पाउँछ
चौथोः ६ + १ = ७ , नंं. ५ ले पाउँछ
यो प्रक्रिया सम्पूर्ण कम्प्युटर सिस्टमबाट सफ्टवायरले गर्छ । आइपीओ पर्ने मुख्य भूमिका नै सुरुमा थुतिएको बलको नम्बर र स्किप भ्यालु हो ।
Previous articleरिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड सम्पन्न
Next articleरिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ नतिजा हेर्नुहोस्